I-RF brazing steel to steel - umkhiqizi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
I-RF ibhonce insimbi yensimbi
Injongo: Ukushayela umkhonto we-O-ring Face (ORFS) noma uxhumano wesilisa enkampeni yensimbi.
• I-tube yensimbi, i-1 intshi (2.54 cm) OD
• I-O-ring Face Seal sleeve kanye nokufakwa kwezixhumi zesilisa
• Ukulungisa amasongo amabhande
• Ukungena kwe-White SureFlow
• Ukusekela i-steel mandrel
Ukushisa 1300 ºF (704 ºC)
• I-DW-UHF-20KW inqubo yokushisa yokufakelwa, ehlonyelwe umnyango osebenza kude oqukethe abakhiqizi ababili (2) 1.5 μF (inani eliphelele le-0.75 μF).
Inqubo I-coil ye-helical ye-ID engu-2.75 (i-7.0 cm) ye-ID iyasetshenziswa ukushisa kokubili ithubhu yensimbi nomkhono we-ORFS noma isixhumi sesilisa se-ORFS. Leli coil laklanyelwe ukubopha noma umshini wesilisa noma uxhumano wesilisa ku-tube. Izingxenye ezizobe ziboshiwe zihlangene ngokushisa futhi zishiswe ngemizuzwana ye-45. Ukucindezela kusetshenziselwa ithubhu ukuze kuqinisekiswe ukuthi ifakwe ngokugcwele ekufakweni njengoba indandatho yebhande igeleza.
Imiphumela / Izinzuzo Izinzuzo:
• Ububanzi obukhulu be-coil buvumela ukulayishwa okulula nokulayishwa kwezingxenye
• Ukugwema ukuxhuma kwamandla kagesi ekuphepheni kokugcoba kugwenywe.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi I-Brazing Steel Ukufaka Ipayipi Yensimbi Nge-Induction, insimbi ephezulu yezinsimbi kuya ensimbi, insimbi yokufaka ibhande, Ukufakelwa kwensimbi yokufaka ibhande ngensimbi, I-RF ibhonce insimbi yensimbi